Na izany aza dia fantantsika fa misy antony lehibe ara-pahasalamana no nahatonga ny fanakatonana ny Fiangonana rehetra. Isaorana ny mpiray Fiangonana tao amin'ny FFKM sy ny hafa koa niara-nanaiky io fandaminana io. Ary anisan'ny nanampy tamin'ny fiadiana tamin'ny fiparitahan'ny valan'aretina Corona Virus izany, hoy ny Aresevekan’Antananarivo Mgr Odon Marie Arsène Razanakolona. Mikasika ny fahafahana mivavaka am-piangonana dia anjaran'ny Eveka isaky ny Diosezy ny manome toromarika amin'izay tokony atao. Ho an'ny Diosezin'Antananarivo, mbola tsy misokatra ny Fiangonana, mitohy ny fankalazana ny Eokaristia ataon'ny Pretra ao am-piangonana, tsy atrehin'ny vahoakan'Andriamanitra. Nentanina ny Kristianina hanaraka ny Eokaristia Masina amin'ny alalan'ny haino aman-jery. Ankoatry ny fandaharana mivantana miainga ety amin'ny Katedraly Andohalo sy ao amin'ny Radio Don Bosco dia tsy misy Paroasy afaka mandefa fandaharana amin'ny haino aman-jery na aiza na aiza.